EFF member voted in MDC-T elections - Bulawayo24 News
30 Dec 2020 at 07:46hrs | Views
The EFF Zimbabwe Tuesday claimed its national chairperson, Shelton Chiyangwa actually moved a motion confirming MDC-T's secretary-general Douglas Mwonzora as the party's president.
"Our member participated at the MDC-T congress and even moved a motion for Mwonzora's confirmation as the MDC -T president," EFF Zimbabwe outgoing president Innocent Ndibali told NewZimbabwe.com.
"We are not even aware of his resignation as a member of the EFF Zimbabwe, yet he voted and even went on to move a motion to validate the outcome of the MDC-T congress."
Ndibali said at one time Chiyangwa wrote a letter to him suggesting that self-exiled former Zanu-PF stalwart Saviour Kasukuwere should take over from him as president.
"At one time Chiyangwa was lobbying for Kasukuwere to take over from me. I refused," said the firebrand politician.
"All the pictures he is seen with Julius Malema it was me because I had mandated him as our national chair to represent me and EFF Zimbabwe,"
More on: #MDC-T, #Elections, #Vote